Geotagged ve ny tranokalanao, bilaoginao, na ny sakafonao? | Martech Zone
Sabotsy, Desambra 23, 2006 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Ny fomba iray mahafinaritra hitadiavana tranonkala dia ara-jeografika. Hitako tokoa fa ny namako iray any am-piasana dia manana bilaogy amin'ny alàlan'ny fitadiavana azy amin'ny sarintany. Misy tranokala maromaro any izay ahafahanao mandefa ny toeran'ny bilaoginao na ny toeran'ny tranokalano amin'ny alàlan'ny fandrindrana ara-jeografika azy. Na izany aza, mila manampy marika meta ho an'ny tranonkalanao ianao raha te hahita.
Efa ela aho no te hanao an'io, saingy tena tsy nisy fitaovana tsotra teo hananganana ny tag ho ahy… mandraka ankehitriny! Anio hariva aho no nanomboka Amboary ny adiresy.
Ny tranokala dia azo ampiasaina hanadiovana ny adiresy, hahitanao ny latitude sy ny longitude anao ary hamorona ho azy geotags ho an'ny tranonkalanao, bilaoginao ary / na ny azy ireo RSS manome sakafo.
Ity misy topi-maso:
Adikao fotsiny ary apetaho ao amin'ny lohatenin'ny tranokalanao na bilaoginao ireo meta tags. Manantena aho fa tianao izany!
Feedpress mamela anao Geotag ny RSS feed anao. Azonao atao ny mandika sy mametaka ny latitude sy ny longitude anao amin'ny Feedburner eo ambanin'ny Optimize - Geotag ny fahananao.
Amazon Associates: Misy mahazo vola ve?
23 Desambra 2006 à 11:23
Hevitra tsara - fampiharana tsara. Aiza no ahitanao ny fotoana!?
23 Desambra 2006 à 11:26
Misaotra, RoudyBob. Ny zanako dia any amin'ny reniny amin'ny Krismasy… izany dia mamela an'i Doug sy ny solosainy! Manana tetikasa maro tahaka izao aho izay natomboka ary tsy mbola vita. Ho herinandro mamokatra izany!
Dec 24, 2006 amin'ny 12: 44 AM
OK. Tsara izany. Misaotra anao.
Dec 24, 2006 amin'ny 1: 53 AM
Dec 24, 2006 amin'ny 11: 48 AM
Namaky sy nieritreritra an’izany foana aho, nefa tsy tonga saina mihitsy. Hevitra tsara sy fitaovana tsara.
24 Desambra 2006 à 12:01
Nanaraka an'i Google aho. Na mino izany na tsia, ny sarintany dia beta. Raha te-hanorina fampiharana avy amin'izany ianao ary miantoka ny fotoana maharitra, dia manolotra dikan-teny nahazoan-dàlana ho an'ny orinasa izy ireo.
Nihaona tamin'ny ekipan'izy ireo vitsivitsy tany Mountain View aho tamin'ny taon-dasa ary ny fitiavana mahita fitaovana toy izao dia tsy manahy loatra momba izany aho. Tsy hoe hidona amin'ny tokonam-baravaran'izy ireo aho!
Raha ny momba ny CSS dia nijirika IE ihany aho CSS tao. Tsara daholo izany. Fantatro fa tsy izany no fomba tsara indrindra, fa ny IE dia tena ratsy ka tsy manao ezaka be intsony aho. Tsapako fa mety ho very mpijery izany… fa oay.
25 Desambra 2006 à 11:46
Fanavaozana: Namboariko ny bug sasany izay namerina adiresy vahiny tsy misy data. Mbola manana olana aho amin'ny famerenana ny tanàna raha any Canada fa miasa aho!
Janoary 3, 2007 amin'ny 6:20 PM
Mike avy any Alemaina
Jan 5, 2007 ao amin'ny 11: 42 AM
Aza misalasala manatona sy mitanisa ny tranokalanao amin'ny http://www.gmapsdirectory.com
Janoary 5, 2007 amin'ny 7:39 PM
Misaotra ry Brian! Napetrako izao hariva izao!
Jan 10, 2007 ao amin'ny 9: 20 AM
Nanandrana izany tamin'ny adiresiko tany Norvezy, ary nahazo hafatra "Miala tsiny". Mba hialana voly dia nanandrana niditra tsotra izao aho "Norway". Tsy maintsy nihomehy aho rehefa nahazo ny valiny 🙂
Misaotra! (ary tsy misy esoeso any!)
Janoary 27, 2007 amin'ny 12:49 PM
Tsara ho an'i Amerika Avaratra, saingy tsy manohana an'i UK.
Afaka mampiasa Geocoder hafa ho an'ny UK izay miasa toy izany
Janoary 27, 2007 amin'ny 1:08 PM
Misaotra, mapperz… ary tranonkala mahafinaritra! Fantatrao ve ny fetran'ny fampiasana ny motera geocoding emad? Mety hanao test beta miaraka aminy aho hahitana ny fandehany. Hanatsara ny fampandehanana ihany koa izany satria azoko atao ny manontany ny mpampiasa amin'ny fomba maro (telefaona, sns.)
Janoary 27, 2007 amin'ny 1:40 PM
Ny fetra dia tsy mazava ny loharano. Saingy nanamarina fa tsy copyrght satroboninahitra ny angon-drakitra (amin'ny alàlan'ny fanamarinana codepoint (data postcode) sy teboka adiresy.
Manodidina ny 93% eo ho eo no marina manerana an'i UK.
Manana ohatra RSS feed ve ianao?
Nanandrana nanampy georss (.xml) tamin'ity
Miara-miasa amin'ny BBC Weather RSS
Janoary 27, 2007 amin'ny 4:44 PM
Mino aho fa olana momba ny trangan-javatra izany ( vs. ). Nanova ny kaody aho ka izany rehetra izany
Mar 11, 2007 ao amin'ny 7: PM PM
Izaho ihany ve sa tsy misy fanavaozana ny snippet KML isaky ny manetsika ny marika aho?
Tsy misy afa-tsy ity: hevitra tsara ary zavatra tena ilaina. Ampiasaiko amin'ny fomba diso fotsiny izy io amin'ny fanaovana sarina polygon (izany hoe LineString-elements) ho an'ny sari-tany google sasany.
Mar 11, 2007 ao amin'ny 9: PM PM
Salama tsy mahalala!
Misaotra anao nitondra izany ho ahy! Efa raikitra izao! Ampiasao daholo izay tianao.
Apr 1, 2007 ao amin'ny 8: PM PM
Salama, Ryan Updike no anarako. Manao Tetikasa Google Earth ao amin'ny Kilasy Jeografia izay miasa miaraka amin'ny KML aho. Afaka manampy anay hanamboatra na haka ny kaody sasany ve ianao mba hamoahana ny kaody KML sasany? Miezaka mianatra ny fomba fametahana ny angon-drakitra ho toy ny fidirana izahay, ary avy eo mamadika vokatra amin'ny code xml. Tena ankasitrahana izay torohevitra azonao omena. Misaotra anao tamin'ny fotoananao.
Apr 1, 2007 ao amin'ny 10: PM PM
Marina, ry Ryan! Faly aho manampy anao. Zahao hoe ity lahatsoratra ity koa momba ny fampiasana rakitra KML. Azo idirana amin'ny alàlan'ny Google API ihany koa izy io mba hananganana ny tranokalanao manokana miaraka amin'ny rakitra KML (nandritra ny fotoana fohy dia tsy nisy afa-tsy tamin'ny pejin'ny sarintany Google.
May 11, 2007 amin'ny 2: 38 AM
Eny, lahatsoratra tena tsara. Saingy tsy tiako ny FeedBurner… Ary Inona no atao hoe KML-file?
May 11, 2007 amin'ny 5: 57 AM
Salama Paul, azonao atao ny mamaky momba izany rakitra KML ao amin'ny lahatsoratra nosoratako. Amin'ny ankapobeny dia rakitra manokana ara-jeografika izay voasoratra amin'ny fiteny eXtensible Markup Language (XML). Misy santionany koa ao amin'ny lahatsoratra!
3 Okt 2007 amin'ny 10:45 PM
Fitaovana lehibe ity. Mahafinaritra ny mahita fitaovana geotagging mora ampiasaina toy izao.
Maniry aho raha misy lahatahiry misy tranokala mampiasa geotagging. Misy mahalala lisitra ve?
4 Oktobra 2007 à 7:12
Misy Feedmap. Efa ela aho no tsy nahita hetsika be loatra tao amin'ilay tranokala.
7 Okt 2009 amin'ny 2:11 PM
Fitaovana lehibe. Nampiasaiko hianarana momba ny sarintany. Misaotra tamin'ny fotoananao sy ny asanao.